OS X El Capitan တွင် Microsoft Outlook ပြProbleနာများအတွက်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ငါက Mac ပါ
ယရှေု Arjona Montalvo | | Mac OS X ကို
အသုံးပြုသူအများအပြားသည်ဇူလိုင်လအထိဖြစ်သည် သဘောတား အဘယ်သူသည်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် OS X ကိုအယ်လ် Capitan, သဟဇာတနှင့်အတူပြissuesနာများကိုအများကြီးသတိပွုမိပါပွီ။ အသုံးပြုသူများအားလုံး Microsoft က Office ကို 2011 အလားတူပြproblemsနာများနှင့်အတူထိခိုက်ဒါသူတို့ရဲ့ဖို့အချိန်ပေးအပ်ပြီးမှပြီးနောက် Outlook အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ, အာဏာရအများအပြားစိတ်ပျက်လျက်ရှိသည်။
ဤပြissuesနာများ၏အများစုအတွက်, အဓိကအား၏အီးမေးလ်လျှောက်လွှာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြသည် သဘောတား OSX El Capitan နှင့်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားသောအခါ။ ပြနာမှာသုံးစွဲသူများသည်ရိုးရှင်းစွာဖြစ်သည် သူတို့သည်သင်၏အီးမေးလ်ကိုမရရှိနိုင်ကြ ကြောင့် app ကိုမှ အချိန်ကိုက်ကိစ္စများ, ထို့ကြောင့်အဘယျသို့ဖြစ်ပျက် application ကိုဖြစ်ပါတယ် ဆာဗာများရောက်ရှိရန်ကြိုးစားသည့်အခါအသတ်မရှိဆွဲထားတဲ့.
မကြာသေးမီက မိုက်ကရိုဆော့ (ဖ်) က၎င်းသည်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေသည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် Outlook 2011 အသုံးပြုသူများအတွက်နောက်ဆုံး update ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည် update ကို 14.5.6ကျနော်တို့ link ကိုထား၏ ဆောင်းပါး၏အဆုံးမှာ update။ ၎င်းသည် Microsoft ၏ဖြေရှင်းချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည် သဘောတား နောက်တဖန်အလုပ်လုပ်ရန်မှာ Yosemite မှ OS X သို့ပြန်သွားရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်ရန်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းပြissuesနာများစွာရှိသည် Mac အတွက် Microsoft Office 2106သုံးစွဲသူများသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲထဲမှမည်သည့် application ကိုမဆိုဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေသည့်နေရာ Word, PowerPoint, Excel နှင့် Outlookသူတို့ကရှာတွေ့ သူတို့မပွင့်ဘူး၊။ ဤပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် patch တစ်ခုထွက်လာမည့်နေ့ရက်မရှိသေးပါ။ သူတို့ထွက်လာသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ် Mac မှဖြစ်ကြောင်းကိုသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
၎င်းသည် OX El Capitan နှင့်ပြproblemsနာများရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်မဟုတ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်သင်ကြည့်နိုင်သည် OS X El Capitan နှင့် AutoCAD ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပေးပါ။ ဒီမှာ link ကို ငါတို့ကိုထားခဲ့တာက Microsoft ပေးတဲ့နေရာပဲ ထုတ်လုပ်သောအမှားများကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X El Capitan တွင် Microsoft က Outlook ပြproblemsနာများအတွက် patch ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်သည် MAC အသစ်တွင် Office 365 ကိုတပ်ဆင်ပြီး Outlook 16 (ကျွန်ုပ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောအီးမေးလ် ၅ ခု) သည်ကျွန်ုပ်အားအောက်ပါပြproblemsနာများကိုပေးသည် - ၁။ ပေးပို့သူအားပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အီးမေးလ်တစောင်ပို့သောအခါလက်ခံသူက၎င်းကို“ b” မှပေးပို့သော“ to” ကိုပို့လိုက်သည်ဟုယူဆသည်။ ; ဆိုလိုသည်မှာလက်ခံသူသည်ပို့သူ ၂ ဦး ကိုတွေ့သည်။ 5.- အဆိုးဆုံး! အကောင့်များထဲမှအီးမေးလ်တစ်ခုပို့သောအခါတစ်ခါတစ်ရံတွင်လက်ခံသူသည်အခြားအီးမေးလ်ဖြင့်အကောင့်တစ်ခု၏အမည်ကိုရရှိသည်။ ဒီပြproblemနာမှာတစ်ယောက်ယောက်ရှိလား။ ငါမိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ၁၅ နာရီအကြာတွင်ဆက်သွယ်မှုကိုနှစ်ဆထပ်မံပေးပို့ခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်အဖြေရှာမတွေ့ဘူး၊ အက်ပဲလ်နဲ့ငါစကားပြောပြီးသူတို့ဟာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ပြproblemနာလို့ပြောကြတယ်